प्लस टु तहमा किन खस्किँदै छ विज्ञानको पढाइ ?
दोस्रो विश्वयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको बमले एकातिर जापानीहरू जल्दै थिए भने अर्कोतिर जापानकै वैज्ञानिकहरू त्यसकाे पर्वाह नगरी प्रयोगशालाहरूमा आफ्नो अनुसन्धानको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए ।
परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने ती वैज्ञानिकले विश्वयुद्धको त्यो समयमा गरेका अनुसन्धानहरू वैज्ञानिक जगत्‌का लागि निकै उपलब्धिमूलक पनि भए । तर, हामी अक्सर सानो बहाना देखाएर काम पन्छाउने, बिग्रियो भने त्यही बहाना अगाडि तेर्स्याउने मात्र होइन, कुनैकुनै बहानालाई त अझ ठगी खाने भाँडो नै बनाउन पछि पर्दैनौँ ।
कोभिड-१९ महामारीको त्रासका कारण सुरुका दिनहरू अन्योलपूर्ण नै रहे । लकडाउन सुरु भएपछि घरमै बसेर समाचार हेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूका टिप्पणी हेरेर दिन बित्न थाले । कति समय लकडाउनमा रहनुपर्ने हो, कोरोनाका कारण कस्तो परिस्थिति आउने हो, मरिने हो कि बाँचिने हो भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । दिनहरू बित्दै गएपछि मलाई भने जापानी वैज्ञानिकहरूबारे कुनै बेला सुनेको कुराले घचघच्यायो । परिस्थिति जस्तो हुँदै गए पनि आफ्नो कामलाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनै न कुनै रचनात्मक काममा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने महसुस भयो । आफूलाई रुचि भएका केही अनलाईन कोर्सहरू सिक्न सुरु गरेँ ।
केही समयपछि स्कुल कलेजहरूमा पनि अनलाईन कक्षा सुरु हुने चर्चा चल्दै थियो, एक दिन हेरिटेज पब्लिकेसनका साथी बाबुराम गौतमको फोन आयो । लकडाउनका कारण सरहरू यतिबेला त खाली नै हुनुहुन्छ होला, किताब लेख्नुपर्‍याे भन्नुभयो । मलाई यो किताब लेख्ने कुरा निकै कठिन काम हो, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर निकै मेहनत गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । आफ्नो योग्यता, क्षमता विचारै नगरी किताब लेख्नेजस्तो कुरा हल्का ढंगले सोचेर सुरु गर्ने कुरा आउँदैन भन्ने लागेर उहाँलाई ल ठीकै छ सोचौँला भनिदिएँ ।
खासमा शैक्षिकक्षेत्रमा शिक्षकको रूपमा काम गरेको नै दुई दशक भइसकेछ । यो अवधिमा मलाई खट्केको एउटा मत्ह्त्वपूर्ण कुरा भनेको राम्रा विश्वसनीय पाठ्यपुस्तकहरू नभेटिनु पनि हो । कतिपय किताबहरूमा थुप्रै ठाउँमा त्रुटि भेटिन्छन् ।
विषयवस्तुको राम्रो दख्खल नभएका शिक्षकहरूले पनि किताब लेख्ने गरेका कारण यस्तो हुने गरेको छ ।बजारमा पाइनेजस्ता किताब लेख्न त हामी पनि सक्छौँ । अलि बढी मिहिनेत गर्दा केही राम्रो पक्कै बनाउन सकिएला नि त भन्ने ठानेर मैले आफूलाई किताब लेख्न आएको प्रस्ताव आफूभन्दा राम्रा अग्रज सरहरूसित पनि सल्लाह गरेँ र उहाँहरू पनि यो फुर्सदको समय मिहिनेत गरेर राम्रो किताब निकाल्नेमा राजी हुनुभयो ।
एक जना साथी सुनाउँदै थिए, 'मैले आफ्नो पब्लिकेसनको किताब लगाउन भनेको थिएँ, त्यसबापत को-अर्डिनेटरले ल्यापटप पाे मागे !' कतै लाइब्रेरीमा किताब हालिदिए लगाइदिन्छु भन्ने, कतै कमिसन माग्ने, कतै उपहार माग्ने काम खुलेआम चल्ने गरेको छ ।
हाम्रो काम अगाडि बढ्यो । लकडाउनको अवधिमा कक्षा ११ र १२ को फिजिक्स किताब तयार गरियो । लेख्ने क्रममा साथीहरूको एउटा राय आयो- हामीले राम्रो किताब बनाउन खोज्दा पढाउने शिक्षकहरू र विद्यार्थीले नरुचाउने र बजारमा नचल्ने पनि हुन सक्छ । त्यस पाटोलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
वास्तवमा यो कुरा सही पनि हाे । किनभने अहिले जुन परिपाटीमा पढाइ हुन्छ, त्योअनुसार त नोटजस्तो छोटो, परीक्षामा बारम्बार सोध्ने गरिएका प्रश्नहरू समावेश गरिएका, हेल्मेट लिएर दगुर्ने शिक्षकहरूले यसो एकछिन नजर लगाएको भरमा कक्षामा गएर पढाउन सक्ने खालको किताब नै चल्छ । हामीले पनि बजारको अवस्था त ध्यान दिनैपर्ने भयो । सकेसम्म त्रुटिरहित बनाउने र सरल बनाउने कुरामा हामी सजग रहेर काम गर्‍यौँ ।
विज्ञानको पढाइ खस्किँदै जानुको एउटा कारण पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री
गलत तरिकाको अभ्यास हुन थालेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र न त पाठ्यक्रम राम्रोसित मिहिनेत गरेर तयार गरिएको छ, न त पाठ्यपुस्तकहरू गतिला पाइन्छन् । किताबभित्र भएका त्रुटिप्रति पनि खासै कसैले ध्यान दिँदैनन । पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुलाई आवश्यकताअनुसार अलि गहिराइमा पुगेर लेखिएको किताबलाई गाह्रो ठानिन्छ । विद्यार्थीलाई किताब पढ्न प्रेरित गरिँदैन, बरु शिक्षकले दिने नोटमै सीमित राखिन्छ ।
११-१२ जस्तो आधारभूत तहमै विज्ञानको पढाइ शिक्षकको नोट र पुराना प्रश्नहरूको सँगालोको उत्तर पढेको भरमा चल्ने खालको भएपछि भोलि विश्वविद्यालय तहको पढाइ अगाडि बढाउन त पक्कै गाह्रो हुन्छ । अर्कोतिर निजी खर्चमा सजिलै मेडिसिन, इञ्जिनियरिङ पढ्न पाइने प्रावधानले पनि धेरैजसो विद्यार्थी आफ्नो पढाइको जग राम्रो बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुँदैनन् ।
विज्ञानको पढाइ खस्किँदै जानुको अर्को कारण शिक्षक र विद्यार्थी
पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्रीका अलावा पढाइको स्तर खस्किँदै जानुमा शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार छन् । परिश्रमअनुसारको तलब सुविधा नपाउनु, तालिम, शैक्षिक सामग्री पर्याप्त उपलब्ध नहुनु अनि बढदो महँगीसित आफ्नो कमाइ पनि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू रहेकाले थुप्रै कलेज डुल्ने र परीक्षामुखी तरिकाले पढाउँदै हिँड्ने गरेको देखिन्छ ।
एक जना शिक्षक त हाँस्दै भन्दै थिए, 'जुन तालमा मादल बझ्छ, त्यही तालमा नाच्ने त हो नि हामी ! शैक्षिक संस्था चलाउनेहरूलाई सरकारले छाडा छोडिदिएको छ, नियमन छैन, आधारभूत मापदण्ड छैन, शिक्षकका समस्या हेरिँदैन । हामीले के को चिन्ता लिनु ?'
अर्कोतिर विद्यालयकै मुख्यत: कक्षा ९ र १० मा राम्रो पढाइ हुनुपर्नेमा एसईईको नतिजा राम्रो ल्याउने बहानामा घोकाएर सीमित प्रश्नहरू (जुन बारम्बार एसईईमा दोहोरिने गर्छन्) अभ्यास गराइन्छ, कतिपय स्कुलमा त कक्षा ९ नै नपढ़ाई दुई वर्षसम्म कक्षा १० को कोर्स घोकाएर परीक्षा दिन लगाइन्छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली निजी लगानीकर्ताहरूको नाफाको विषय बन्यो, सुध्रनै नसक्ने गरी दलदलमा फस्दै गएको छ । परीक्षाको नतिजालाई देखाएर आफ्नो व्यापारको धन्दा चलाउन छुट भयो । सिक्ने सिकाउने वातावरण हराउँदै गयो ।
यसरी उतारिएका विद्यार्थी राम्रो नतिजा आएको भ्रममा परेर विज्ञान पढ्न आउँछन् । केही वर्षयता विज्ञान पढ्न आएका विद्यार्थीहरू सामान्य गणितका सूत्रहरू पनि नजान्ने, रचनात्मक क्षमता नभएका धेरै भेटिन्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कुरा पनि शिक्षकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
अहिलेको पुस्ता इन्टरनेट र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीसितै हुर्केको पुस्ता पनि भएकाले उनीहरूको समय फिल्म हेर्नमा, क्रिकेट फुटबल हेर्नमा, सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुनमा, आफ्ना केटा साथी/ केटी साथीसित कुराकानी गर्न, घुमफिर गर्न आदि थुप्रै कुरामा बित्ने गर्छ । समय बित्ने मात्रै होइन, उनीहरूको दिमाग एकत्रित हुन गाह्रो छ । बचेको समय पढाइमा दिँदा पुग्दैन, अनि राम्रो जग छैन भने त त्यो फलामको च्युरा नै हुन जान्छ । विद्यार्थीका आफ्नै समस्या पनि उनीहरूको पढाइको स्तर खस्कनुमा कारक देखिन्छ ।
शैक्षिक संस्था चलाउनेहरूमा नैतिकता नहुनु अर्काे कारण
अर्को निकै महत्त्वपूर्ण र तीतो यथार्थचाहिँ स्कुल/कलेजको मनपरीतन्त्रले गर्दा पढाइको स्तर खस्केको हो । एउटै कक्षाकोठामा ५०/६० जनासम्म विद्यार्थी हुलेर पढाउने, आधारभूत भौतिक सुविधाहरू (जस्तै: पुस्तकालय, क्यान्टिन, प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान आदि) उपलब्ध नगराउने, गुणस्तरीय शिक्षाको रटान दिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनि विभिन्न शीर्षकमा पैसा कसरी असुल्न सकिन्छ भनेर सोच्ने प्रवृत्ति पाइन्छ ।
पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसार कक्षाभार (पिरियड संख्या) उपलब्ध गराइँदैन । एउटा अंग्रेजी पढेको प्रिन्सिपल अथवा को-अर्डिनेटर जसको मर्जीअनुसार विज्ञान विषयका कक्षा संख्या, प्रयोगात्मक कक्षाको समय, फिजिक्स, केमिस्ट्रीका किताब तोकिन्छ । शिक्षकहरूले पनि त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा शिक्षाकाे स्थिति कस्तो होला ? एउटा शिक्षक राम्रो किताब सिफारिस गर्ने हैसियतसम्म राख्दैन, उसको हातमा 'माथि'बाट आउने सूची थमाइन्छ ।
एक जना साथी सुनाउँदै थिए, 'मैले आफ्नो पब्लिकेसनको किताब लगाउन भनेको थिएँ, त्यसबापत को-अर्डिनेटरले ल्यापटप पाे मागे !' कतै लाइब्रेरीमा किताब हालिदिए लगाइदिन्छु भन्ने, कतै कमिसन माग्ने, कतै उपहार माग्ने काम खुलेआम चल्ने गरेको छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार 'प्रोजेक्ट वर्क' गराउनुपर्ने भनिएको छ, कलेजका रवैया देख्दा उक्त शीर्षकमा पैसा असुल्ने बहानाबाहेक कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
विद्यार्थीलाई कुनै विषयवस्तु छनोट गरेर त्यसका बारेमा शिक्षकको सहयोगमा अध्ययन गर्ने, तथ्य तथ्यांक बटुल्ने र प्रतिवेदन लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रोजेक्ट वर्कको अवधारणाअनुसारको तयारी कलेजहरूले गरेका छैनन् । त्यसका लागि शैक्षिक सामग्री थप्नुपर्ने र शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन कुरा कलेजहरूका लागि सबैभन्दा अरुचिको कुरा हो ।
तोकिएको जति प्रयोगात्मक कक्षाको संख्या नगराउने, प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरण, रसायन र सामग्रीहरू पर्याप्त नल्याउनेजस्ता समस्या बढ्दाे रूपमा देखिएकाे छ । धेरै कलेजमा अहिले न त तोकिएको जति संख्यामा प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छ, न त तोकिएको समयावधिबराबरको कक्षा गराइन्छ । प्रयोगात्मक कक्षा पनि श्राद्ध गरेजस्तो आफ्नो अनुकूलतामा छिटो गरेर सक्न पनि र लम्ब्याउन पनि मिल्ने हुँदै गएका छन् ।
अधिकांश कलेजमा प्रयोगात्मक कक्षा सुरक्षित तवरले कसरी चलाउने भन्नेबारे सामान्य अभिमुखीकरण समेत गराइँदैन । उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फोहोरहरू पोको पारेर फाल्नेजस्ता गैरजिम्मेवार व्यवहार देख्न सकिन्छ । सरकारी नियमन छैन, पूरै कोर्स पढाइ हुन्छ कि हुँदैन, कसले हेर्ने ? कमसेकम विद्यार्थीबाट शुल्क लिएपछि त तोकिएको सेवा दिनुपर्ने हो । ७५ ग्राम लेखिएको चाउचाउमा ६५ ग्राम मात्रै राखेर बजारमा पठाएर बेच्ने ठूला व्यापारी, पैसाचाहिँ अन्य ठाउँको भन्दा धेरै ठटाउने तर बासी भात ख्वाउने राजमार्गका होटल र तोकिएको सेवा नै घटाएर विद्यार्थी र शिक्षकलाई ठग्ने टाइसुट लगाएर बस्ने शैक्षिक व्यापारीहरूमा खासै अन्तर छैन ।
बमबारी हुँदैगर्दाको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो धैर्यता नगुमाई काम गर्न सक्ने जापानी वैज्ञानिकजस्तै जनशक्ति हामीले कहिले पाउन सकौँला ?
कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा बहानाको फाइदा उठाउन उद्यत देखिए स्कुल कलेजहरू ! अनलाइन कक्षामार्फत पढाइयो तर सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर विद्यार्थी राखेर । अनलाइन कक्षा खासै प्रभावकारी नभएको गुनासो छ विद्यार्थीहरूको । शिक्षक संख्या पनि कटौती हुने, कामचलाउ कक्षाकै भरमा पहिलेजत्ति नै शुल्क असुलेर शैक्षिकसत्र धकेल्नतिर लागे ।
एकाध स्कुल/कलेजले मात्र शिक्षकहरूलाई पूरै तलब दिएका हाेलान् ! यसरी शिक्षकका समस्यालाई पनि लत्याउने अनि काम चलाउ पारामा यो साल यस्तैयस्तै भयो भनेर विद्यार्थीलाई पनि गतिलोसित नपढाउने काम स्कुल/कलेजले गर्दै आएका छन् ।
खासगरी प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउन चाहिने विज्ञानको आधारभूत तहको पढाइमै यस्तो लापरबाहीबारे बेखबर सरकार र आफ्नै अनुकूल शिक्षालाई व्याख्या गर्ने र नाफाका लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने शैक्षिक व्यापारीहरूलाई अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकलगायत सम्बन्धित सबैले खबरदारी गर्न ढिला भइसक्यो । यी सबै कुराको मुख्य दोषी भने सरकार नै देखिन्छ । बमबारी हुँदैगर्दाको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो धैर्यता नगुमाई काम गर्न सक्ने जापानी वैज्ञानिकजस्तै जनशक्ति हामीले कहिले पाउन सकौँला ?
(लेखक भौतिकशास्त्रका अध्यापक हुन् )
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन २, २०७७, १२:४२:००